Nezvedu - Wuxi Anofara Chemical Technology Co., Ltd.
Yakagadzwa muna2008, Wuxi Inofara Nemakemikari Technology Co., Ltd.is inyanzvi bhizinesi rakabatikana mukugadzira uye kugovera mhando yepamusoro Active Mishonga Ingredients (API) uye yakakosha yepakati Fine & Yakakosha Chemical, Tsika Synthesis Compound, Basic Chemical Chigadzirwa etc.
Sekambani inotungamirwa-inotungamirwa uye inotariswa nevatengi, Wuxi Rejoys akagadzwa kuve mumwe weChina-Akatungamira vagadziri uye vanopa epamberi uye enhau makemikari emishonga, biotech uye agrochemical maindasitiri epasirese.
Yedu masevhisi akagadzirirwa kubatsira vatengi vedu pasirese kupfupisa nguva uye kudzikisa mutengo wekusimudzira mishonga uye kugadzirwa kuburikidza nemutengo-unoshanda uye unoshanda mhinduro.
Isu takashanda mukumisikidza hukama hwebhizinesi hwakanaka nevatengi mumakambani emishonga uye ebiotech, nzvimbo yekutsvagisa uye mayunivhesiti epasirese. Isu takavakawo nzira dzakapamhama dzebhizinesi nekubatana nemakemikari, mishonga uye bhaotech vagadziri muChina kuve nenguva yekuendesa kwakakodzera zvigadzirwa nemasevhisi.
Mukurumbira wedu wakavakirwa pakuwana kuvimba kwevatengi vedu, tichiremekedza zvido zvavo zvakavanzika, uye nekuzadzisa zvivimbiso zvedu.Neinjiniya ane hunyanzvi uye netiweki yekutengesa inosanganisa ruzivo rwemberi kuchinjana chikuva uye masevhisi epasi rose, Wuxi Rejoys ndiye mudiwa akanyanya unogona kuvimba!
Kuve mumwe weakanakisa makemikari vatengesi muChina
Ziva kukosha kwehunyanzvi uye gadzira risingaperi rombo
Preciseness, Kurumidza, Innovation